Silungisa "Chevrolet Epica" - ushintsho timphawu tesakhiwo noma esikhundleni izingxenye ku Ushintshe, sandla ngcono izici lobuchwepheshe emotweni. Le ntuthuko zenzelwe ukwandisa sokunciphisa umoya lapho zindiza, rwe, izinga lula ye imoto.
Tuning engaphandle "Chevrolet Epica" - intuthuko imoto ukuthuthukisa ekwazi ukumelana namandla omoya njalo iguqule. Kuze kube yimanje, izingxenye ezilandelayo ezifakiwe:
Dodger isethi (sifaka: front futhi bakhulise amabhampa, Sills Linings);
emoyeni nemifula ophahleni futhi bonnet;
Ngehele emoyeni esidayisa;
Cabanga esigabeni ngasinye kabanzi.
ikhithi umzimba "Chevrolet Epica"
Ngokuvamile, esenziwe ngepulasitiki ne-fiberglass, okuyinto ukusabela kahle ekwelashweni. Isakhiwo impahla kugcina ezakheke futhi amandla anele ukumelana zonke imithwalo. Ngo womshini zonke enikeziwe yasibamba futhi izimbobo umoya grilles futhi headlamp.
Izinsimbi "Chevrolet Epica"
Tuning kwale ngxenye ikakhulu eyenziwe fiberglass noma ngepulasitiki bese inezingxenye ezintathu: i skeleton yangaphakathi, okuyinto kufihlwe, anezikhala impahla kanye bezel yangaphandle. Ungase futhi ukwengeza ngama-chrome. Made phambi hlupha "Chevrolet Epic" (tyuning- samuntu) izigaba:
1) Ukukhiqizwa ifreyimu engaphandle futhi kwangaphakathi by isimo noma umphumela ezishisayo indaba;
2) Iya anezikhala cut futhi soldered ngaphakathi eheleni;
3) Khona-ke ndawonye ukuze engxenyeni engenhla izinto zidalwe, kuyilapho kungenzeka soldered noma kuvikelwe ngezikulufo;
4) is ababethi umbala imoto noma yimuphi omunye uma kunesidingo.
imininingwane ubuchwepheshe ukukhiqizwa ulula, futhi abashayeli abaningi ngokwabo wakwenza ngezandla zakhe, ekhuphuka nge inhlanganisela ezintsha.
Ukufakwa iminyango mpo
Kuyinto imfihlo ukuthi umnyango mpo bheka zikanokusho ngamunye. Ukuze "Chevrolet Epica" ukwenza ukuguqulwa okunjalo, udinga ukuthenga umnyango canopies ekhethekile esikhundleni standard. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukulungiswa igebe ihlukile kancane.
abashayeli abaningi ukuveza ubuntu imali amafasitela Tuning. Lokhu kungase anombala umbala othile, namabala ingilazi Umdwebo upende noma iphethini nokunamathisela. Master imoto ukulungiswa usethe imininingwane eyengeziwe uma wenza Tuning "Chevrolet Epica": spoiler ingilazi - ingxenye yomshini, esiklanyelwe ukwandisa kwe ezingemuva phezulu imoto.
Painting kanye yesifutho sopende
Akekho Tune yangaphandle imoto akuyona ngaphandle ukudaya ngabanye noma yamaphetheni. It kuyodingeka baphendukele ochwepheshe bazokwazi qualitatively futhi zisebenza upende ukwenza yesifutho sopende.
Inqubo kwezobuchwepheshe umdwebo bese yesifutho sopende kunalokho kuyinkimbinkimbi futhi kudinga imisebenzi mass:
Ngaphambi kokuqhubeka ngqo inqubo, kubalulekile ukwenza umsebenzi wokwenza amalungiselelo. Kuhlanganisa kukhethwa imibala, izinto, kanye nekudvweba tintfo, okuyinto abalingisa PC yakho yokuqala.
Isinyathelo esilandelayo ukulungiselela for Umdwebo. Ukuze lokhu kuyadingeka ukuqaqa ngokuphelele emotweni. Susa noma iziphi izinto ezingase ukuqaqwa (phambili fenders, iminyango kanye isiqu isivalo).
Zonke evele okuhambisana coloration, sanded onesigqi elingenalutho.
Kube sekulandela esigabeni priming. Tuning is okuvame ukusetshenziswa ezimbili izinhlobo kwenziwa: ekuqaleni futhi isiphetho.
Ezindaweni lapho idingeke khona, kuba ungqimba ezondile luting.
Okulandelayo kuyisinyathelo yokusebenzisa upende ungqimba wokuqala ukuze ome amahora 12-16 ezingeni lokushisa 40-50 degrees Celsius.
Isendlalelo kapende wesibili isicelo ngemuva kwamahora angu-24 emva kokuqala. Omiswe Kuthatha amahola angu 16-20 at 30-40 degrees.
Esigabeni esilandelayo - the Airbrush. Ukusebenzisa Airbrush master ekhethekile kancane kudala umdwebo nge indaba emfushane.
I last isinyathelo - isicelo ukuvenisha nemoto ezipholisha.
Ngakho, i-Tune yangaphandle "Chevrolet Epic" usuphothuliwe. umdwebo ngamunye Airbrush ukwenza imoto eyingqayizivele.
Enye indlela eyayivamile Tuning "Epic" Ukumiswa izibani nehlukile futhi izibani. Ngeke nje wenze imoto enhle, kodwa futhi ngcono ikhono ukukhanyisa. Tyuning- izibani phambi oluqanjwe Messeri-ukukhanya, okuyinto ngokukhethekile zenzelwe lo imodeli futhi izinhlobo ezimbili zezinkantolo ukukhanya main.
Samuntu yokuqala esakhelwe lens switchable a distal / proximal futhi ehlukile ikhomba ukukhanya ematfuba. Lolu hlobo lwe-funa e-United States.
Samuntu wesibili uye LED strip ukugijima izibani emini, izinkomba LED kanye lens amabili ehlukile izibani aseduze nakude. ezivamile Okuningi eYurophu nase-CIS. Izindleko imayelana $ 400.
izibani Tail oluqanjwe PROsport ngesisekelo LED. Khanyisa yokukhanya enjalo sibonwa nganoma isiphi isikhathi sosuku kanye sezulu izimo. Inqubomgomo intengo isibani umuntu $ 300.
Tuning Salon "Chevrolet Epica" - ushintsho wonke noma ingxenye wezangaphakathi imoto. Lokhu kungenziwa kokubili kuthabathela ecaleni esisebenzisekayo ngenjongo umhlobiso.
Izinhlobo ezinkulu Tuning salon yilezi:
Isihlalo ebamba noma esikhundleni ezemidlalo zabo;
ukufakwa multimedia isikhulumi izinhlelo;
constriction we ithuluzi panel, ophahleni kanye kwezinsika;
esikhundleni ukukhanya izibani zangaphakathi;
Faka lwesikhathi zokuzivikela;
Ukubuyiselwa amabhande esivikelo emotweni;
ukufakwa uhlolo olusha nezilinganiso iphaneli;
amakhadi ekupheleni umnyango;
nokunamathisela umsindo-vibration atihambi todvwa.
Yiqiniso, i-Tuning ezinjalo "Chevrolet Epica" kuyinjabulo ezibizayo. Izindleko isilinganiso ngcono imayelana $ 4,000, okuyinto abakwazi ukukhokhela umnikazi ngamunye. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi e-US, izindleko iqoqo okunjalo Tuning imayelana $ 2000.
I Tuning isofthiwe injini
Chip Tuning "Chevrolet Epica" - ushintsho isofthiwe computer yokuthuthukisa rwe nezici ashukumisayo yenjini. Ochwepheshe abaningi batusa ukuba afeze le misebenzi ngezandla zabo, kwazise ziningi ubuqili eziningi ukufaka firmware futhi ilungiswe kahle.
Ukuze uthuthukise izici motor, onguchwepheshe uxhuma computer ugibelile imoto nge ikhebula ekhethekile. Itjhuguluko kungaba kwenziwe ngezindlela ezimbili:
ukushintsha ngokwenza ikhodi ezengeziwe uhlelo lokusebenza;
esikhundleni isofthiwe ECU enguqulweni entsha isofthiwe "Tuning".
Uma kwenziwe ngendlela efanele, ukusetshenziswa imoto ukwandisa ngo-15%, kanti umthamo kuzokwanda 25-30%.
Physics injini Tuning
Silungisa "Chevrolet Epic" yenjini zingenziwa ngokufaka esikhundleni ezinye izingxenye eyinhloko amandla iyunithi. Kukhona abakhiqizi eziningana engasindi injini izingxenye zalolu hlobo locingo, okuyilezi: GM, Vortex, Haul, Wag, Allint, Fenix, ATI futhi AWD.
Bakha izinto ezilandelayo, ezikhulisa izici rwe we motor:
isibalo sabahlengikazi abaqeqeshwayo futhi qeda valve;
isilinda ikhanda umhlangano;
isikhathi amabhande izipilingi;
Ifaka zomdabu induku yokuxhuma;
yenhlansi plugs, ephezulu voltage izintambo futhi ukuthungela abasabalalisi.
Lapho ufaka isethi egcwele injini amandla anyuswe 42 amahhashi.
Silungisa chassis, ukumiswa kanye eziqondisa
Silungisa "Chevrolet Epica", ukumiswa kanye chassis imoto, cishe akuhlukile Tuning ezinye onobuhle ngenxa tesakhiwo zabo ziyafana. Ukuze kuzuzwe esiphezulu ukulawula kahle, nezixhumi nge izingxenye ejwayelekile ezidingekayo esikhundleni ebusweni umgwaqo futhi ilawula lokhu okulandelayo:
dampers neziphethu "Amahhashi" noma BZR;
ATM ukumiswa stabilizers VICI, yesiza;
amathiphu eziqondisa wer, Vortex, ATM;
ukumiswa izingalo kanye ibhola amalunga omzimba - DRV, ATM, Vortex, JP, Alpin;
iphakethe polyurethane saylenblokov;
amasondo kanye nosayizi isondo futhi oyifunayo.
Konke lokhu kuzosiza ukuthuthukisa Dynamics, ukungawi imoto, kanye handling nokuphepha phezu komgwaqo.
Lapho silungisa ukubopha "Chevrolet Epica" uhlelo kufanele esikhundleni izingxenye okujwayelekile version modified nethuthukisiwe:
Brake amapayipi amanzi amashubhu (ATM);
kanye amakhebuli yokupaka ukubopha (Brembo);
cleaner booster futhi a isilinda ukubopha (ATM, Brembo);
ukubopha pads kanye akwazi ukugcina (Brembo).
Njengoba ezothatha isikhundla zonke lezi imininingwane, imoto kunciphisa ibanga unyathela amabhuleki ngama-12%. Lokhu ehilelekile kubhekwa njengento ebaluleke kakhulu, ngoba sifana ngokuyinhloko, ukuphepha. Ngakolunye uhlangothi, okwethulwa imininingwane ibonakaliswa okunokwethenjelwa futhi iqine.
Silungisa izandla zabo
Silungisa "Chevrolet Epica" ngezandla zakhe kuwufanele ukwenza kancane futhi abale zonke ukuthi ufuna ukuphumelela. Zikhona ongakhetha eziningi, kusukela ukucwebisa umzimba esikhundleni izingxenye injini kanye chassis.
Eyokuqala Izinsimbi ethuthukisiwe ukuze "Chevrolet Epica". Tuning kwale ngxenye Kulula ngokwanele ukuchitha njengoba esikhundleni yesici anezikhala Ungasavele kubhekwe sibuyekeze. Kanye ezifakiwe ethuthukisiwe ngehele abashayeli iziketi ezenziwe fiberglass nobumba yezimoto. Wegazi namaphiko babevame Foam, okuyinto ke kunzima ngempela ukususa izingxenye imoto, ngaphandle kokulimaza paintwork.
Tuning Salon "Chevrolet Epica" ngezandla iqede kokufaka nesembozo esihlalweni futhi kudeshibhodi nokunamathisela stickers ezahlukene. Futhi abashayeli okunekhono esikhundleni ejwayelekile umnyango khadi upholstered lesikhumba esikhundleni, nge imigudu ehlanganyele izikhulumi.
I Tuning ezivamile "Epic" ngezandla zabo ukwahlukanisa ukumiswa, chassis kanye nokupholisa uhlelo. Konke lokhu kungenza wena cishe kunoma iyiphi Umthandi womculo imoto.
BMW 320: classical nokwethembeka
Renault Scenic, umsunguli we amasiko
21074 - imodeli edume ezifuywayo auto umkhakha
Ukuphelela kweGAS 21. Ukuthungatha njengendlela yokuwufeza
Toyota Ist: Ukucaciswa izincazelo Japanese imoto icwecwe
Funny scene ngoMashi 8 abadala. Izimo for uSuku Lwabesifazane Emhlabeni
I-Labrador (amaminerali): incazelo, isicelo, isithombe
Saya eVietnam: isimo sezulu ngenyanga
Indlela ukuhlela isayithi? indawo isakhiwo - isithombe. Indlela ukuhlela yakho cottage ehlobo?
Indawo yokudlela "La Moore" ngesikhathi metro station "Pioneer" Petersburg: kumamenyu kanye nokubuyekeza amakhasimende
Inkaba egazini kuzalwa, yini okufanele uyenze? Icubungula inkaba
DogFight eMoscow izigaba: Uhlolojikelele, ukukala, abaqeqeshi kanye nokubuyekeza
Ubani kungabonwa sikabani? Isilinganiso izimpendulo ethandwa
Umthamo Lethal utshwala: kuyini?